Mpanao gazety miaro ny arisiva - Zon'olombelona & Light art by ∴ PixelHELPER Foundation
Arovy ireo mpanao gazety
Fiarovana ny mpanao gazety. Ho an'ny teny maimaimpoana
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 12. Janoary 2018
Ny #PixelHELPER dia midera ny 100.000 noho ny vaovao mitarika ny fisamborana ireo mpanohana ny mpamono an'i Daphne Caruana Galizia. Azafady mba ampianaro ny fanentanana ataonay ao amin'ny pixelhelper.org/de/spenden Miaraka amin'ny fikambanana IL-KENNIESA izahay dia manomana hetsika maneran-tany mba hanangonana vaovao momba ireo mpamono olona sy hanamafisana ny fanerenan'ny media any amin'ireo firenena mandray anjara.
"Manifesto, nosoratana tamin'ny ran'ny olon-kafa" - izany no nataon'ny mpahay tantara amerikanina Mike Davis antsoina hoe baomba. Ny vao haingana indrindra ireo fandaharan'asan'ireo nahitana Semtex, fantatra amin'ny anarana hoe plastika ihany koa baomba, tia ny ambany fotsy Peugeot 108 amin'ny lalana mivily any Bidnija, 309 mponina iraika ambin'ny folo kilaometatra andrefan'i renivohitr'i Malta Valletta.
Ao amin'ny 16. Oktobra, Daphne Caruana Galizia, 53 taona, naka ny kodiaran'ny fiarany. Izy mitarika ny vovoka lalana mankany amin'ny arabe kosa dia miverena sisa, nidina ny tendrombohitra avy izay azo jerena amin'ny lavitra tsirim-ranomasina, lasa kely, bibidia toerana fanariam-pako sy ny zucchini hektara, 270 metatra, ka ho mena-nanamorona famantarana, izay misy atody iray manontany ny mpamily mba tsy hanonitra ny mitovy aminy. Ny fipoahana, izay inoan'ny mpikaroka, dia navoakan'ny finday. Amin'ny famantaranandro 15.04, ny sisan'ny peugeot 100 metatra dia mijanona eo amin'ny saha eo ankavanan'ny lalana. Ireo mpandinika siantifika fito-polo izay nanadihady ny vatan'i Galizia telo andro taty aoriana tao amin'ny hopitaly Mater-Dei any Valletta dia tsy dia mahita loatra. Vitsy sisa ny vatan'ilay mpanao gazety malaza indrindra sy mpanao gazety faran'izay ratsy. Namoaka ny teniny farany minitra 29 izy talohan'ny nahafatesany tao amin'ny bilaoginy: "Na aiza na aiza misy anao amin'izao fotoana izao: na aiza na aiza misy mpangalatra. Ny fahadisoam-panantenana. "
Herinandro taty aoriana, ny telo lahy zanak'i Galicia dia ao amin'ny Parlemanta Eoropeana ao Strasbourg, miady hevitra amin'ny famonoana ny reniny momba an'i Malta ary angamba momba ny EU. Ny solombavambahoaka Green Sven Giegold dia mandray ny mikrôfo. "Maty teny an-dalambe i Daphne. Tsy nisy toerana miafina, tsy nanandrana nanao ilay fanafihana ho toy ny loza iray ny mpamono azy. Mifanohitra amin'izany, fanehoan-kerisetra mahery vaika izany, "hoy izy. Dia mazava hoe nahoana ny baomba tsy eo ambany fiara ny polisy na ny lehiben'ny mpampanoa lalàna General: "I Daphne, izay nanipy fanazavana momba ny rafitra ny famotsiam-bola sy ny kolikoly tao Malta - dia tsy manam-pahefana ireo."
Raha mbola ao Strasbourg ny fankalazana dia i Rosy Bindi, filohan'ny Antisiana Anti-Mafia Italiana, dia miditra ao amin'ny hotely Excelsior eny amin'ny sisintanin'i Valletta. Nandritra ny andro maromaro, ny Kaomisiona dia tao Malta, efa nomanina ela ny fitsidihana, nefa ankehitriny, taorian'ny famonoana ilay mpitoraka blaogy, dia goavana ny fahalianana. Manodidina malefaka gelled mpiambina, mangarahara screws tariby avy amin'ny fitoriana atao teo anatrehan'ny, Bindi mipetraka teo amin'ny latabatra ary mitodika any mpanao gazety izay efa niandry amin'ny seza hoditra matevina eo amboniny. Ny mafia, hoy i Bindi, mahita an'i Malta ho "paradisa kely". Ary ireo "mpanome tolotra ara-bola afaka manolotra orinasa misokatra any Malta" dia "ampahany amin'ny olana".
Ho an'i Malta, fanambarana an'i Bindi dia olana. Efa manam-pahaizana momba ny mafia italianina izy nandritra ny am-polo taona, noho izany dia manana lanjany ny teniny. Miady ho an'ny lazany i Malta hatramin'ny nahafatesan'i Galicia.
Ny famonoana azy, toy ny maro no mahita izany any amin'ny nosy, dia fanambarana fa ireo matotra momba ny ady amin'ny heloka bevava dia tsy mahazo antoka intsony momba an'i Malta.
Giegold, izay nandray anjara tamin'ny fandaniana hetra nandritra ny am-polo taonany ary nahafantatra ny fikarohana nataon'i Galizia, dia miantso ireo sendika iraisam-pirenena tokony halefa. Niantso ny fametraham-pialan'ny Praiminisitra Sosialista Joseph Muscat izy ary miantoka fa ny Parlemanta Eropeana dia te-handefa delegasiona any Malta mba "hamerenana ny lalàna momba ny lalàna".
Tsy izy irery no mahita izany. Raha mitatitra momba ny fanjakana ao amin'ny nosy ireo andro ireo, dia miresaka momba ny orinasam-piraketana ny takelaka mainty, ny haba, ny fifandraisana maizina Azerbaijan, ny fanondranana solika, ny fivarotana ary ny filokana an-tserasera. Ny tantara lehibe indrindra nataon'i Galizia dia nanampy tamin'izany. Ny zanany Mathew dia miasa ao amin'ny tambajotra fikarohana IJIC, izay nanambara ny Panama Papers 2016. Momba azy dia nahazo ny antontan-taratasy momba an'i Malta i Galizia. Hitany fa Keith Schembri, lehiben'ny governemanta praiminisitra Muscat, sy ny mpiara-dia aminy, Konrad Mizzi - ny heriny voalohany, minisitry ny fizahantany ankehitriny - dia mitazona orinasa fandrakofana any amin'ireo Nosy Virijiny Britanika sy Panama. Ireo rehetra ireo dia mihisaka ao anaty sary mihetsiketsika, izay manenika ny sisintany misy eo amin'ireo orinasa tsy miankina amin'ireo mpanao politika, ny fifandirana ny fidiram-bolan'ny orinasam-panjakana ary ny famonoana olona.
Izany dia sary izay zara raha mifanaraka ny tany manodidina azy Valletta, izay feno ny mpandraharaha sy ny tanned mpianatra, miaraka amin'ny fiara-maimaim-poana, fasika midorehitra Old Town, izay Eoropa ny kolontsaina renivohitra tamin'ny sivy herinandro - tsy manam-paharoa misokatra-rivotra Medieval Museum, amin'ny alalan'ny isan'andro an'aliny ny mpizaha tany sy ny maro loko pennants manaraka ny boky torolalana toy ny mpanao ady masina ny faneva, ary avy eo amin'ny hariva, faly aoka hafafiny dranomasina dipoavatra ao St. Julian, an-dafin'ny ny helo-drano mba hihinana bitro amin'ny divay mena ary pintweise hinterherzukippen Cisk tahiry.
Ny sasany amin'izy ireo dia mijery an'i Jonathan Ferris. Tamin'ny andro fahavalo taorian'ny nahafatesan'i Galizia, nipetraka teo am-baravarankelin'ny Westin Dragonara izy ary nisy solomaso matevina. Tao ambadiky ny fasan-jiro, ny onja dia namely ny vatolampy, teo amin'ny sofa dia mipetraka ireo fianakaviana tsara tarehy amin'ny akanjon'ny tantsambo. Ferris no lehiben'ny fiarovana ny hotely dimy kintana, ary manoro hevitra fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny any Malta.
Satria hatramin'ny herintaona lasa dia ny polisin'ny polisy Ferris, tompon'andraikitra amin'ny fanodinam-bola. Ny bilaogin'i Galizia, hoy izy, dia nanampy azy hatrany amin'ny fanadihadiana. "Fantany ireo zavatra tsy fantatsika. Matoky ny olona fa tsy mpanao gazety ny polisy. "Ferris fiofanana mpiara-miasa aminy ao Brussels, Shina, Alemaina, dia nitondra Gaddaffis kaonty tamin'ny Novambra 2016 dia nisolo ho lohan'ny Malta famotsiam-bola manohitra ny fahefana (FIAU). Teo anelanelan'ny volana Martsa 2016 sy July 2017 dia nanoratra ny tatitra efatra momba ny ahiahin'ny kolikoly amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta. Ny rehetra, hoy Ferris, dia niorina tamin'ny fikarohana nataon'i Galizia. Izay te hanaraka azy, raha mandalo ao amin'ny antsipiriany izy dia mitaky fotoana.
Ny fohy dikan-tenin'ny FIAU ny fomba fianarana: kabinetra lehiben'ny Keith Schembri nampiasa ny mailbox orinasa ao Panama koa mba hanafina 100.000 euro, izay cashed avy amin'ny fivarotana ny telo Malta pasipaoro ho Rosiana. Nandoa vola tapitrisa euros amin'ny kolikoly ihany koa izy ho an'ny talen'ny gazety Maltese. Ferris mihevitra fa i Schembri dia maniry ny hiantoka fa mbola mijanona ny gazety ny governemanta. Mandritra izany fotoana izany dia te-ho azo antoka fa ny taratasy manondro bebe kokoa ny taratasy avy aminy, toy ny sideline Schembri dia mbola taratasy mpandranto. Ary: Schembri sy minisitry ny angovo teo aloha Konrad Mizzi dia nahazo kolikoly avy any Dubai avy amin'ny orinasa iray izay mandany gazy misy entona any Malta. Io vola io ihany koa dia niparitaka tamin'ny orinasan-tsoratry ny roa. Ny bilaogy farany amin'ny Galizia farany "Allwhere are crooks" dia miantso ireo orinasa ireo.
1,07 tapitrisa euros amin'ny fifanarahana entona entona?
Nandà ny zava-drehetra i Schembri sy Mizzi. Izay mamela ny maro ho misalasala momba ny lalàna ao Malta: Ny tatitra momba ny FIAU na dia tsy nalefa any amin'ny polisy mihitsy aza - na avy amin'ny manampahefana mivantana mivantana - avy amin'ny manampahefana. Tsy nanana vokany izy ireo.
Ny tatitra dia i Ferris, ny mpiara-miasa aminy Charles Cronin na ny lehiben'ny FIAU Manfred Galdez. Tsy misy olona intsony ao amin'ny birao. Nandeha i Galdez, araka ny filazan'ny tenany ihany, tamin'ny fisotroan-dronono. Ao amin'ny 16. Nanosika an'i Ferris sy Cronin, mpandimby azy, i 2017, hono, ho lasa valopy fotsy iray miaraka amin'ny taratasiny eny an-tanany. "Tsy fantatro mihitsy ny antony", hoy Ferris. Hatramin'io fotoana io ihany dia afaka matory amin'ny pilina izy. Ny FIAU dia miteny amin'ny taz fa "manana tombontsoa manokana ny fandroahana an'i Ferris sy Cronin" noho ny antony "antony mahomby".
Raha nijanona niaraka tamin'ny FIAU izy dia mety ho nanaraka ny tantara lehibe farany tao Galizia, hoy Ferris. Momba an'i Michelle Muscat, vadin'ny praiminisitra. Ao amin'ny orinasa noho ny aminy Egrant ao Panama Tokony ho nikoriana avy any Azerbaijan 1,07 tapitrisa euros - justament taorian'ny Malta sy Azerbaijan no nanao sonia fifanarahana eo amin'ny fanampiana mandatsa-dranomaso teny amin'ny 18 taona. "Te hisoroka an'ity fanadihadiana ity ry zareo," hoy i Ferris. Nanameloka ny fahefana manohitra ny kolikoly izy mba hamerenana azy indray.
Ny tatitra momba ny FIAU dia fantatra hatramin'izao, noho ny lehilahy iray miantso ny tenany ho "mpifanolo-bodirindrina amin'i Daphne amin'ny politika" ary izy ireo no nitokiany. Simon Busuttil dia solontenan'ny PN konservativa, hany antoko mpanohitra; Lehilahy iray maneho ny fomba sy ny feon'ny mpampita televiziona Amerikana, ny tempolin-tsofiny, ny mozika mainty mainty amin'ny alàlan'ny rivotra. "Fampahalalana tsy misy afa-tsy amin'ny WhatsApp," hoy izy. "Voatahiry ny findaiko." Ny mpitsidika dia miarahaba ny efitrano fivorian'ny mpanohitra ao amin'ny Antenimieram-paritra, sehatra fiompiana akoram-pahasitrana izay manenika ny araben'i Valletta.
Raha namotika tanteraka ny governemanta i Galizia, ny praiminisitra Muscat dia naniry ny fifidianana hatramin'ny volana jona lasa teo. Busuttil no kandidà ambony indrindra tamin'ny mpanohitra. Nisy olona nanao tatitra taminy ny FIAU. Ny Busuttil dia nanely ny antsipiriany rehetra niaraka tamin'ny firaisana teo anoloan'ny gazety. Tsy nanampy izy: ny Maltese dia nijanona ho mahatoky an'i Muscat. Nianjera i Busuttil, mety ho vokatry ny fitomboan'ny toe-karen'i Malta. "Taorian'izany dia te hiala amin'ny politika aho," hoy izy. "Nefa ankehitriny, aorian'ny fahafatesany dia tsy mitovy ny zavatra rehetra."
Tamin'ny volana Jolay, Busuttil dia nanafay ny polisy hanadihady ireo minisitra. Nosoratan'i Schembri sy Mizzi ny fanoherana. "Raha very aho, dia hankany Strasbourg aho," hoy i Busuttil. Te-hamita ny asan'i Galizia izy.
Ilay mpitoraka bilaogy dia nanafika mafy an'i Muscat, ny ambiny ny governemanta, ary ny ampahany betsaka amin'ny mpanohitra. Amin'ny ampahany amin'ny "lahatsoratra mamirapiratra", toy ny hoe ny fahavalony ratsy indrindra ao amin'ny foiben'ny antokon'ny fitondrana PL no miteny. Amin'ny ampahany amin'ny fanafihana manokana sy ny lahatsoratra momba ny fiainany ara-nofo. Saingy tsy misy olona any Malta mihevitra fa mpanao politika mpanao kolikoly izay nitazona ny baomba teo ambanin'ny fiarany.
Ny teoria izay tena mahazatra indrindra any Malta - sy Italia - dia ny hoe i Galicia dia niditra tamin'ny fikarohana mafia mba handripaka menaka avy any Libya mankany atsimon'i Eoropa. Ity hevitra ity dia manohana amin'ny zava-misy fa tao anatin'ny roa taona lasa dia nisy fanafihana baomba dimy tao Malta izay iharan'ny heloka bevava ireo tra-boina. Tsy nisy nambara. Isaky ny mampiasa Semtex. Ity dia novokarina, ohatra, tao amin'ny Libyan Zuwara - izay nipoiran'ny menaka fitokonana.
Na dia izany aza, betsaka ao Malta no mahita an'i Muscat ho tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'i Galicia sy hametra-pialana. Tsy dia hoe satria ny polisy dia tsy niaro an'i Galizia. Raha ny marina, ny mpamaham-bolongana dia nandà ny fiarovana ny polisy tamin'ny lasa, satria natahotra izy fa hisy fiantraikany amin'ny asany izany. allege in Muscat, ny Galizias fianakaviana, ny mpanohitra sy ny mpanao gazety Malta, ny rijan Busuttil lefitra toy izao manaraka izao: ". Tsy misy azo atao hanoherana ny kolikoly, raha mbola mpanompo kolikoly dia tokony hitoetra ao amin'ny birao" Mba mandefitra ny raharaham-barotra, mampiraviravy ny fanjakana Institutions - ary dia manaiky ny raharahan'ny mpanao heloka bevava voalamina.
Na izany aza, ny mpanohitra dia tsy tafiditra ao anatin'ny toe-javatra. Miankina amin'ny hetraketraky ny hetran'ny orinasam-piharian-karena maoderina, ny indostrian'ny filokana an-tserasera ary ny fivarotana pasipaoro ho an'ireo vahiny mpanankarena. Busuttils PN dia mandray anjara amin'izany. Hoy i Green Giegold: "Nivarotra ny zony hitondra maloto i Malta. "Nanosika ny fitondrana lalàna izy io miaraka amin'ny kolontsain'ny tsimatimanota sy ny fanavakavahana eo amin'ny elitika ara-politika sy ara-bola".
Ao amin'ny Casinostadt St. Julians any Malta no misy ny tranobe Mayfair, iray amin'ireo trano fonenana maro ao amin'ny nosy, izay ahitana ny anaran'ny orinasa iraisam-pirenena mivezivezy ao anaty mailaka. Ny orinasam-panorenana dia ny lohahevitry ny "Filaharan'ny Malta", daka ho an'ny fitaratra tamin'ny volana mey. Ny lahatsoratra dia nanamarika fa sahiran-tsaina ny vahoaka Spiegel, satria ireo mpitsidika ao amin'ny birao dia nilaza fa misy raharaham-barotra tena izy. Ankehitriny, enim-bolana tatỳ aoriana, ny sary ao amin'ny Foyer Mayfair dia tsy miova: K + S, Sixt, BASF sy Jacobs - rickety mailboxes sampany ny Global orinasa, mbola misy rehetra.
Fandaniana ny tombom-barotra eto Malta: Ny 35 isan-jaton'ny haba vola natolotr'i Malta amin'ny orinasa varotra dia mamerina izany ho an'ny 30 isan-jato; Izany no zavatra mahavariana momba ny 5 isan-jato. Ho lasa "toerana maloto" i Malta, nosoratan'i Galizia izany.
Tsy menatra ny minisitry ny fitantanam-bola
Ny gazety Daily Malta dia nanamarina fa ny 2015 dia nahazo tombony avy amin'ny Malta 4 miliara euros. Nanaiky ny vola latsaky ny 250 tapitrisa ny firenena. Mety ho an'arivony tapitrisa 1,4 no ho very amin'ny rakitra hafa. Edward Scicluna, minisitry ny fitantanam-bola any Malta, dia mihozongozona ny lohany. "Any Malta, raha ny salanisa dia avo dimy heny noho ny any Alemana, moa ve ireo mpiasa afaka milaza fa ihomehezana avy amin'ny efatra-fahadimy amin'ny karamany izy ireo? Mazava ho azy fa ", hoy i Scicluna. "Misy ny fiheverana mahatsikaiky." Ny tsy fanarahan-dalàna ny fireneny, ny rafitra "tsy takatry ny saina". Ny firenena dia tsy toeram-pivarotana hetra fa manolotra tahiry heny "fifaninanana". "Tokony ho menatra ve izany?" Hoy izy nanontany. "Tsia!" Raha ny marina, ireo tomponà orinasa dia handoa mihoatra noho ny 5 isan-jato - satria tsy maintsy mandoa hetra amin'ny tombony ambony avy amin'ny orinasan'izy ireo any an-trano.
Ny tena marina dia mitranga izany, saingy tsy misy azo antoka, hoy ny Green Giegold. "Malta dia manome ny tombony ho an'ny hetra na inona na inona raha hiverina amin'ny hetra faharoa." Mahafinaritra tokoa izany, azo vakiana amin'ny orinasa vahiny be dia be ao amin'ny nosy.
Saingy ny fanakatonana ny "voafetra" amin'ny orinasa goavam-be Alemà dia tsy misy antony, hoy i Scicluna. "Tena ara-dalàna izany." Miseho any amin'ny firenena rehetra ny fanadiovana vola. "Nefa ireo lehibe dia manome tsiny ireo ankizy noho ny manafina ny olany manokana." Ny lalàna Malta dia nodidiana alohan'ny hidirana ao amin'ny EU ary ny firenena dia nanara-maso tsy tapaka ny fanodinkodinam-bola. Namafisiny ny tsiambaratelon'ny banky ary nanapa-kevitra ny hanamafisana ny fanodinkodinam-bola USE ATAD, hoy i Scicluna. "Ankoatra izany, manome ny fampahalalam-baovao rehetra avy any ivelany izahay."
Ny ampitson'iny taorian'ny nahafatesan'i Galizia, ny praiminisitra Muscat dia hiasa ao Dubai amin'ny seminera "Global Citizenship". Izy io dia natolotr'i Henley & Partner - ilay sampan-draharaha izay mivarotra ny pasipaoro Malta amin'ny vidin'ny tarika manodidina ny 900.000 Euro. Ny maha-olom-pirenena amin'ny alalan'ny fampiasam-bola no anaran'ny fandaharana. Muscat dia miresaka momba ireo tombontsoa azo avy amin'ny "fiainana andavanandron'ny fiainana sy ny zom-pirenena".
Mandalo mivarotra vola mainty
"Ireo tarehimarika maivana avy any Rosia sy ny Moyen Orient" dia natao ho "Malgache Faly", nanoratra i Galizia. Ho azy ireo, ny fandraharahana pasipaoro dia tsy inona fa varavarana hafa ho an'ny vola mainty. Ny minisitry ny fitantanam-bola Scicluna dia tsy te-hanaiky izany. Olona an-tapitrisany maro no nahazo visa iraisam-pirenena isan-taona. "Ny zato maromaro novidin'i Malta hatreto dia tsy hita ao amin'ny antontan'isa," hoy izy. Izy ireo dia "matetika mpanakanto na atleta izay te ho olom-pirenena" izay mividy teratany Maleziana.
Ny fisalasalana kely indrindra momba ny fiandohan'ny fananana dia nolavina, izany no nitranga tamin'ny fampiharana fahefatra. Ankoatra izay, hoy i Scicluna, nanadihady ny fandaharan'asa ny Vaomieran'ny Vondrona Eoropeana ary tsy nanaiky. "Ireo firenena hafa dia manao izany tsy misy ny tombo-kevitry ny EU, fa manondro ny rantsan-tananao." Raha ny marina, tsy i Aotrisy ihany no mandalo amin'ny lamina mitovy. Alemana ihany koa dia mamela ny tenany hiasa ho an'ny tenany, hampiasa vola iray farafaharatsiny euros.
Tamin'ny harivan'ny avaratry ny fahafatesan'ilay mpitoraka blaogy, nivory teo anoloan'ny biraon'ny Praiminisitra Muscat ny vehivavy. Ny Beatles dia miantsoantso avy amin'ny mpandahateny kely. Maro no eto amin'ny PN na avy any amin'ny tontolo iainany, nefa tsy misy te haheno izany. Ny fihetsikao dia "tsy mandray anjara", mazava ho azy. Nosintonin'izy ireo ny tapaka ary napetrany ny bao lay. Hatramin'ny ela dia te-hibodo ny toerana izy ireo. Samy manao ny T-shirt fotsy iray ihany ny tsirairay. "Na aiza na aiza no fijerinao, misy tabataba na aiza na aiza. Ny famoizam-po ", hoy izy.
Fiarovana ny mpanao gazety. Ho an'ny teny maimaimpoana January 26th, 2019Oliver Bienkowski